काठमाडौका यी मुख्य स्थलमा यौन खेलौना पसल, दैनिक सयौँ ग्राहक, महिला कति ? - Cinekala - Cinekala
काठमाडौका यी मुख्य स्थलमा यौन खेलौना पसल, दैनिक सयौँ ग्राहक, महिला कति ?
Cinekala राजधानी काठमाडौ मुख्य स्थलमा रहेका केही होडिङ बोर्ड र भित्र राखिएका पसलका सामानले के यो प्रश्न नगर्ला ? यो रूढिवादी समाजमा सांस्कृतिक विचलन की क्रान्ति ? हो यही प्रश्नले हामी यसको केही खोजी गर्न लाग्यौँ ।
तर आजको दिनसम्म आइपुग्दा नेपालमा खेलौनामा नेपालीको दिलचस्पी बढ्दै गएको पाइयो । नेपालको राजधानी काठमाडौका प्रमुख बाजार बीचबीचमा रूढिवादी समाजमा सांस्कृतिक क्रान्तिको दृष्य देखिन्छ । अझै यो यस्तो समाज जुन तस्विरमा देखिएका चित्र र त्योसँग जोडिएका क्रियाकलापका बारे सार्वजनिक चर्चा अझैपनि हुन सक्दैन ।घरमा सबै परिवार बसिरहेका बेला परिवार नियोजनका साधनको विज्ञापन आयो भने अझैपनि परिवारका सदस्य रातोपिरो भएर मुख लुकाउँछन् । तर यो खेलौनाको ब्यपार भने गज्जब भइरहेको छ । मञ्जीत पौडेल र प्रवीण ढकालको खेलौना पसलमा हामी पुग्दा अनौठो क्रान्ति भइसकेको देखियो । उनीहरुले महिला पुरुषको खेलसँग सम्बन्धित कृत्रिम खेलौना बेचेर नै लाखौ कमाइसकेका छन् ।